ERW (Electro-Ukumelana ashiselwe) Pipe Line - China Qingdao Haokun Imishini
ERW (Electro-Ukumelana ashiselwe) Pipe Line Ngenxa ukuthuthukiswa ngokushesha kwezomnotho e China, kukhona ukufuneka kakhulu izinga enhle, ende ubukhulu ERW amashubhu amafutha & igesi zokuthutha, amanzi & indle zokuthutha nokwakhiwa civil izimboni. Ukuze banelise tidzingo amaklayenti ethu, sinobufakazi siqu lobunikazi HAOKUN ERW ukukhiqizwa Tube line yethu. UKUZE-date, siye enikeziwe elikhulu ububanzi ERW16 ', ERW 20 ", ERW 24" kumakhasimende ethu ahlukahlukene. Thina nge ukugqamisa icala lapho thina ...
Ngenxa ukuthuthukiswa ngokushesha kwezomnotho e China, kukhona ukufuneka kakhulu izinga enhle, ende ubukhulu ERW amashubhu amafutha & igesi zokuthutha, amanzi & indle zokuthutha nokwakhiwa civil izimboni. Ukuze banelise tidzingo amaklayenti ethu, sinobufakazi siqu lobunikazi HAOKUN ERW ukukhiqizwa Tube line yethu. UKUZE-date, siye enikeziwe elikhulu ububanzi ERW16 ', ERW 20 ", ERW 24" kumakhasimende ethu ahlukahlukene. Thina nge ukugqamisa icala lapho siye edayisa ERW 25 "Tube Mill ukuze Guangzhou Juyi Pipe Factory. Kulesi Mill, siye eklanyelwe ovundlile Loop accumulator, ngesivinini Ikhoyili Edge Milling kanye Flying Curter ukuthuthukisa amakhono ayo. Enye ERW 25 "Tube Mill kubuye enikeziwe yithi eMozambique WBHO Inkampani. Ngaphezu kwalokhu kukhuluma, siye wabutha idatha lokucwaninga ERW 630 X 19.1 mm steel grade X80 emtapweni design yethu. Singasho kugcwale umlomo ukuthi sesikuzuzile isimo wokuHlinzekwa-ubuciko kokuxazulula for ubukhulu esikhulu ERW Tube Mill.
Ukulandela ukukhula okusheshayo yomnotho Chinese, ephezulu grade, ubukhulu esikhulu imvamisa high umphetho iqonde ashiselwe amapayipi kabanzi ezindaweni ezifana petroleum zokuthutha, ezisemadolobheni iphayiphi amanethiwekhi kanye ezakhiwe, ukusunduza up ukufunwa kubo, okuyinto kudala amathuba amasha tekutfutfukisa ipayipi umugqa yokukhiqiza amafemu kanye abakhiqizi imishini.
Phakathi Eminyakeni yamuva, ngokufunda futhi iyavuleka eziphambili ERW umshini ubuchwepheshe kusukela kwelinye izwe, sanquma yakhelwe futhi lakhiwa elikhulu ububanzi ERW zokukhiqiza imigqa nge siqu amalungelo ethu empahla. Ikakhulukazi ezinye amayunithi eyodwa, njengabangane khama roller, ziye lobunikazi e China. Kuze kube manje, siye eseqedile ukuklama ezinkulu osezingeni ERW zokukhiqiza imigqa nge Ukucaciswa: 16 "ERW, 20" ERW, 24 "ERW. Phakathi kwalabo kakade 20 "ERW, 24" ERW ukukhiqizwa Izigayo bafakwa ukusebenza; Ukuze Guangzhou Juyi Steel Pipe Ukukhiqiza Co., Ltd, enye isethi ephelele 25 "ERW ukukhiqizwa Ngokuvumelana iluphu ovundlile. Speed ​​High Edge Milling Machine nge yokusaha. Cutting Machine kanye nokudoba Area, kwaba usuyasebenza; isethi ephelele 25'ERW umugqa luyothunyelw WBHO eNingizimu Afrika isivele ngaphansi yokuhlola.
Ngaphezu kwalokho, inkampani yethu enekhono zonke zokwenza ERW630x19.1mm nensimbi grade X80, futhi iye yathuthukiswa JCOE1420x32mm nensimbi grade X80 ipayipi eziphothene ukukhiqizwa umugqa.
steel ukulungiselela Strip ingxenye
Uncoiling : Amabili ukushayela ekwandiseni imiphini nemisebenzi yokulawula ukungezwani futhi ukulungiswa enezingqimba strip steel
Ukuhlubula steel aba umshini : Nge imiqulu 5 ukusebenza wavula / ivaliwe ngokushesha isilinda wokubacindezela.
Welding inqubo ipuleti ngesikhathi ikhanda nomsila uphela : MAG Welding, CO2 igesi isihlangu.
Ovundlile umshini Welding design : ahlabayo Combined futhi Welding ndawonye.
Positioning of strip steel phambi Welding : ukukala ngokuzenzakalelayo futhi qondanisa isikhundla strip steel.
Accumulator Kuvunguza : Ngaphandle e ngaphakathi ngaphandle
Strip isivinini yokudla : Maximum 75M / imiz.
Ukuphakama komugqa ugingqe : Mayelana 1000mm lalingabonakali emkhathizwe
Imodi Production : ukukhiqizwa okuqhubekayo
Speed komugqa ukukhiqizwa : 12m / imiz ~ 25m / imiz.
-Drive uhlobo Uhlaka main : roll ngasinye eceleni eliqhutshwa CNC AC imvamisa variable control ijubane noma ukulawula isivinini DC
Owenza umqondo : Lungisa umugqa elendlalekile, phansi indlela ukwakha
Ukuphakama komugqa isikhungo : Mayelana 1000mm ngaphezu (kwesigaba sizing) umkhathizwe
Uhlobo obumba : yezinyoni ukwakha
Ukubekwa kweqa isigayo : PLC-elawulwa okusheshayo kulungiselelwa uhlelo kanye manual ophoqelelwe kulungiselelwa
Ukulungiswa of esigayweni imiqulu : PLC-elawulwa ukulungiswa othomathikhi ne ukulungiswa mathupha.
Inner Burr nokususa : Burr Inner is zilahlwe ngokusebenzisa indandatho ummese efakiwe ekhethekile ithuluzi lonke.
Engaphandle Burr nokususa : scrapers amabili Burr yangaphandle futhi omunye crimpers ka Burr yangaphandle.
S izing pipe : zezitsha ezine Sizing asetshenziselwa ukukhiqiza ipayipi isiyingi.
Steel ipayipi Ehlala : Qondisa steel ipayipi nge turkey amakhanda futhi isigayo sizing.
Imodi isaha flying : CNC Double isigayo ahlabayo ikhanda ezindizayo usike-umshini.
Olandelayo: Kuvunguza Pipe Mill
30inch longitudinal kwamanzi Arc ashiselwe Steel Pipe Mill
30longitudinal kwamanzi Arc ashiselwe Steel Pipe Mill
762 longitudinal kwamanzi Arc ashiselwe Steel Pipe Mill
Advanced Weld Seam Heat Ukwelashwa
Erw Pipe Owenza Machine
Erw Pipe Umshini
Erw Pipe Mill Ukwakha
Erw Pipe Mill Abakhiqizi
Erw pipe Mkhiqizo ion Line Mill
Erw Pipe ashiselwe Machine
Erw Pipe-iphrofayela Production
Erw ashiselwe Pipe Mill
Lashukumisa Tube Ukwenza Machine
High Frequency Inducion zokushisela Pipe Mill
High Frequency Induction zokushisela
Joint-Butt zokushisela Machine
Longitudinal kwamanzi Arc zokushisela Pipe Umshini
Longitudinal kwamanzi Arc zokushisela Pipe Mill
Lsaw Pipe Umshini
Metal Pipe Umshini
OD & I.D. weld Nquma
Pipe Umshini Ukwenza
Pipe Ukushefa Machine
Pipe zokushisela Machine
Nokucindezela Steel Pipe
Sawl Pipe Umshini
Ss Pipe Ukwenza Machine
Steel Pipe Umshini
Tack-Final ashiselwe Pipe Mill
Tack-Final ashiselwe Pipe Mill 100
Tack-Final ashiselwe Pipe Mill 100 Inch
Tack-Final ashiselwe Pipe Mill 1422
Tack-Final ashiselwe Pipe Mill 1620
Tack-Final ashiselwe Pipe Mill 1820
Tack-Final ashiselwe Pipe Mill 2032
Tack-Final ashiselwe Pipe Mill 2200
Tack-Final ashiselwe Pipe Mill 2540
Tack-Final ashiselwe Pipe Mill 56
Tack-Final ashiselwe Pipe Mill 56 Inch
Tack-Final ashiselwe Pipe Mill 64
Tack-Final ashiselwe Pipe Mill 64 Inch
Tack-Final ashiselwe Pipe Mill 72
Tack-Final ashiselwe Pipe Mill 72 Inch
Tack-Final ashiselwe Pipe Mill 80
Tack-Final ashiselwe Pipe Mill 80 Inch
Tack-Final ashiselwe Pipe Mill 86
Tack-Final ashiselwe Pipe Mill 86 Inch
Tube Ukwenza Machine
ezisetshenzisiwe Erw Pipe Mill
Zokushisela Pipe Umshini
Zokushisela Pipe Production Line